« Ataovy mpianatro ny firenena rehetra » – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 septembre 24, 2012 Laisser un commentaire sur « Ataovy mpianatro ny firenena rehetra »
Toy ny fanao isan-taona dia nanantanteraka “Veillée de prière” ny Zoma 24 Aogositra ireo mpianatra ao @ Association des Etudiants en Médecine Vétérinaire de Madagascar Ambatobe (A.E.M.V.M :Commission Spirituelle). Nanomboka tamin’ny 7 ora alina ary nifarana t@ 5 ora maraina ny fiaraha-mivavaka. Ny Feon’ny Filazantsara (F.F) no nitarika ny fotoam-pivavahana, Pastera 3 (avy @ Fiangonana FJKM, Advantista) no nifandimby namelabelatra ny lohahevitra : « La fin du monde 2012 » : ara-baiboly ve izany sa tsia ? ary Pastora avy @ Fiangonana Loterana no namelabelatra ny Lohahevitra « Ny mozika sy ny hira kristiana ». Nisy koa fijerena film « The couragious ».
Teny anelanelan’ny fotoana dia nisy fanentanana nataon’ny F.F momba ny Fampianarana Baiboly ara-Pifandraisana, Literatiora kristiana, Film (sehatr’asa atolotry ny F.F@ fiaraha-miasa) ary fizarana tract “Ataonao ho Iza moa Andriamanitra?”. Ireo Chorales ny Departement moa dia nandray anjara feno tamin’ny hira ho fiderana an’Andriamanitra. Nahatratra teo amin’ny 280 ireo mpianatra tonga , nisy ireo avy amin’ny Faculté hafa.
Zava-dehibe ny fiaraha-mivavaka toy izao satria mandalo fotoan-tsarotra ny fiainan’ireo mpianatra eny @ Université noho ny “crise politique” eto @ firenena. Mila apetraka feno eo am-pelan-tanan’Andriamanitra ny fianarana ary indrindra Fitoriana ny Filazantsara eny anivon’ny Université. Tamin’ny fiafaran’ny fotoana dia nisy ireo mpianatra niroso hanaraka ny Fampianarana Baiboly ara-pifandraina omen’ny F. F maimaim-poana, nisy koa ireo vonona handray anjara amin’ny famelabelaran-kevitra ao @ “emission radio” volana Septembre2012 vokarin’ny F.F mikasika ny ny tontolon’ny tanora.
ireo mpianatra niroso hanaraka ny Fampianarana Baiboly ara-pifandraina omen’ny F.F
Publié parfilazantsaramada septembre 24, 2012 Publié dansUncategorized